Waa maxay ujeedka shirka ka furmay magaalada Baydhabo? | Hadalsame Media
Home Wararka Waa maxay ujeedka shirka ka furmay magaalada Baydhabo?
Waa maxay ujeedka shirka ka furmay magaalada Baydhabo?
(Baydhabo) 08 Sebt 2019 – Ra’iisul Wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya, mudane Xasan Cali Khayre, ayaa kulan looga hadlay wax ka qabashada baahiyaha ka jira deegaannada Koonfur Galbeed magaalada Baydhabo kula yeeshay safiirradda dalalka xiriirka la leh Somalia iyo wakiillada hey’adaha caalamiga ah ee fadhigoogu yahay Muqdisho.
Ra’iisul Wasaare Khayre oo qorshaha socdaalkiisa Koofur Galbeed uu salka ku hayay horumarinta adeegyada bulshada, horumarinta iyo amniga, waxaana lagu wadaa inuu dhagax dhigo dhowr mashruuc oo horumarineed, iyadoo ay dhici karto inuu tago meelo ay ka mid tahay magaalo maarsada Baraawe.
Wakiillada iyo safiirrada oo DF Somalia ku ammaanay dadaalka ay ugu jirto dib-u-kabashada dalka, waxayna ballan qaadeen in Dowlad gobaleedka Koonfur Galbeed ay ku taageerayaan qorshayaasheeda horumarineed.
Previous articleNAXARIISTA WAALIDKA: ”Wuxuu qado u kexeeyay aabbihii oo aad u gaboobey, kaddib maxaa dhacay?!”
Next articleSarkaal ka tirsanaa Ciidamada AMISOM oo maydkiisa laga helay Xerada Xalane